I-Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. igxile kwi-R & D, uyilo kunye nokuveliswa kwemigca eyahlukeneyo yeiglavu zemveliso, iiglavu zemigca yemveliso yeiglavu, imigca yemveliso yeiglavu ze-PVC, oomatshini bekhondom kunye nezixhobo, oomatshini be-diaper kunye noomatshini be-napkin kunye nezixhobo. Inkampani yokuvelisa oomatshini abaqeqeshiweyo edibanisa urhwebo, itekhnoloji kunye nenkonzo. Inkampani yethu izinikele kuphando lwetekhnoloji yezixhobo kunye nophuhliso kunye nokwenza imveliso, kwaye yenze iiprojekthi zokujika izixhobo zezixhobo kunye neenkqubo zemveliso.
Umsunguli, uMnu Chen, waphumelela iYunivesithi yaseJingdezhen Ceramics e-Jiangxi ngo-2002. Emva kokuthweswa isidanga, uye wazibandakanya kwi-R & D kunye noyilo kwizixhobo ezaziwa kakuhle zase China kunye ne-napkin izixhobo zoomatshini be-napkin kwaye unamava amakhulu kuyilo loomatshini. Ngo-2015, waqala ukudibana nezixhobo zokwenza iiglavu, kwaye waseka ngokubambisana uChuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. kunye neenjineli ezineminyaka engaphezu kweshumi yamava eigloves, ezinikele ekwakheni oomatshini abakhulu kunye nezixhobo ezenziwe China .
Iimveliso zeChuangmei Intelligent Technology Co, Ltd. zithunyelwa ngaphandle kurhwebo lwasekhaya nakwamanye amazwe: iYurophu, uMzantsi Melika, uMzantsi mpuma weAsia, uMbindi Mpuma, iNtshona Asia, iAfrika neminye imimandla. Bonke abantu bamkelekile ukuba beze kubuza.
I-Chuangmei Intelligent Technology Co., Ltd. ibekwe kwiTaiwan Business Investment Zone yaseQuanzhou, eFujian, isixeko esihle esiselunxwemeni kwintshona yeChina Taiwan Strait.At okwangoku inabasebenzi abangaphezu kwama-200, ineeworkshops zokucwangcisa kunye neeworkshops, kwaye izixhobo processing，Indawo yomzi-mveliso ifikelele kwizikwere ze-11,000, kunye nokuzimela kweofisi ezizimeleyo indawo engama-700 eemitha zesikwere.
Ukusukela oko yasekwa, inkampani ibisoloko ibambelele kwifilosofi yokudibanisa "ukuthatha isayensi kunye netekhnoloji njengesikhokelo, umgangatho njengesiqinisekiso, iwonga lokusinda, kunye nolutsha kuphuhliso"; ngethemba lokongeza ubungangamsha kumzi mveliso wase China wokuvelisa kunye nokubonisa oomatshini abakhulu kunye nezixhobo ezenziwe e-China kwimarike yamanye amazwe.